Home / DASTUURKA SOOMAALIYA PDF
Author: Vudorg Mogis
Madaxweyne ku-xigeenka ayaa la wareegaya xilka madaxweynaha inta dacwaddiisu ka dhammaaanayso.
Xorriyadda Kulanka, Bannaanbaxa, Cabashada iyo Codsi-wadareedka Sidaas darteed, muwaaddin kasta waxaa waajib ku ah in uu: Sinnaanta 1 Muwaaddiniinta oo dhan, iyagoo aan loo eegin lab iyo dheddig, diin, xaalad bulsho ama dhaqaale, afkaar siyaasadeed, qabiil, naafannimo, xirfad, dhalasho iyo afguri toona, xuquuqda iyo waajibaadkaba waa u siman yihiin sharciga hortiisa.
Hindise sharci qabyo ah oo ka bilawday Golaha Shacabka 1 Golaha Shacabka marka la horkeeno handise sharci qabyo ah waxaa u furan inuu sameeyo mid ka mid ah sida soo socota: Xiriirka Iskaashiga Heerarka Dawladaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Heer kasta oo Dawladeed ha ahaadeen heerar siman ama kuwo kala sarreeya waa in ay yeeshaan xiriir iskaashi oo wanaagsan 1 Dawlad kasta waa in ay ixtiraamtaa, ilaalisaana xadka awoodaha ay leedahay iyo awoodaha ay leeyihiin Dawladaha kale, waana in ay: Waxaa magaalada Muqdisho lagu soo gabagabeeyay shirka qaran ee dib u eegista dastuurka Soomaaliya, kaasoo maalmihii la soo dhaafay ka socday magaalada Muqdisho.
Suggidda Amniga Jamhuuriyadda Federaalka 1 Xukuumadda Federaalku waxay damaanad-qaadaysaa nabadda, gobannimada iyo ammaanka qaranka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo bedbaadinta shacbigeeda, iyadoo la adeegsanaayo adeegyada ciidammada amniga oo ay ku jiraan: Guddiga Qaranka ee Madax Bannaan ee Doorashooyinka: Guddigga Runta iyo Dib-u-heshiisiinta: Hantida 1 Qof kastaa wuxuu xaq u leeyahay in uu hanti yeesho, ku dhaqmo, ku naalloodo, iskana gado ama iska wareejiyo markuu doono.
Dhaqangelinta Xuquuqda Asaasiga Ah Dhaqanka iyo Afka 1 Dawladdu waa in ay horumarisaa hiddaha iyo dhaqanka suubban ee Shacabka Soomaaliyeed, iyadoo ku dedaaleysa in ay bulshada ka suuliso caadooyinka haraaga ah iyo kuwa dhowaan-soo-baxa ah ee wax u dhimaya midnimada, ilbaxnimada iyo caafimaadka bulshada.
Hawlwadeennada iyo Shaqaalaha Dawladda Xafiisyadda karaaniinta iyo xafiisyadda xubinaha shaqaalaha ee karaaniinta waa inuu noqdaa xafiisyo adeegga baaarlamaanka. Dhaqangelinta Xuquuqda Asaasiga Ah 1 Xuquuqda asaasiga ah iyo xorriyadda lagu aqoonsaday qaybtan waa in la dhowraa marka kasta oo sharci la dejinayo lana fulinayo. Haddii Baarlamaanka Federaalka uusan oggolaan ama uusan waqti ku darin xaalad degdeg ah, markaa xaaladda degdegga ah ma jireyso. Qodob kale oo Somali ah. Ku-simaha madaxweynaha ahna guddoomiyaha golaha shacabka ee Soomaaliya, Maxamed Mursal ayaa sheegay in uu si rasmi ah u furanyahay dib u eegista dastuurka Soomaaliya, ayna jiraan qoddobo ay u baahanyihiin inay ka wada hadlaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada soomaaliya kajira, six al looga gaaro.
Isla sharcigaasu waa inuu ku soomaalliya nidaam xisaabtan adduun ahaan la tijaabiyay lana aqoonsanyahay oo leh halbeegyo la xariira kaydinta iyo khrajbixinta maaliyadda oo si iskumid uga dhaqangala eastuurka walba oo Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ka mid ah.
Cutubka 1aad – Baaqa Jamhuuriyadda. Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka ah wuxuu leeyahay awood sharci- dejin oo ah: Xaqaas waxaa ka mid ah inuu abaabulo ama ka mid noqdo ururro ay ka mid yihiin ururro shaqaale ama xisbiyo siyaasadeed.
Iscasilaadda Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Madaxweynuhu wuxuu u gudbinayaa istiqaaladiisa Barlamaaanka Federaalka, isaga oo marsiinaya Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka ah. Daryeelka Qoyska 1 Guurku waa aasaaska qoyska oo ah saldhigga bulshada, ilaalintiisuna waa waajib sharci ah oo saaran Dawladda. Maxkamadeynta iyo Maamus-Ka-qaadista Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka 1 Xil-ka-qaadidda Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxaa soo jeedin kara Golaha Shacabka marka lagu eedeeyo khiyaano-qaran, xadgudub culus skomaaliya Dastuuri ah ama ku-xad-gudub sharciyada kale ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
Durid Sharci 1 Sharci maray habraaca ansixinta sharciyada iyo dhaqangeliddaba waxaa dastuurrka duri karaa oo keliya inuu ka soo horjeedo Dastuurka.
Iskaashiga Dawladaha xubinta ka ah Dawladda Federaalka Cutubka 8aad Baarlamaanka Federaalka. Xaqa Dacwadda iyo Isdifaaca Xilka Wasiirka, Wasiir ku-xigeenka iyo Wasiir Dawlaha Haddii Golaha Wasiiradu ay ansixiyaan, magacyada waxaa loo gudbinayaa Baarlamaanka Federaalka labada soomaaliyaa Haddii Baarlamaanka Federaalka uu ansixiyo magacyadaas, waxaa loo gudbinayaa Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka, si uu magacaabistooda xeer uga soo saaro.
Kheyraadka Dabiiciga ah Qaybsiga kheyraadka dabiiciga ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxaa ka wada xaajoon doona Dawladda Federaalka Soomaaliya iyo Dawladaha Xubinta ka noqon doona Dawladda Federaalka Soomaaliya iyadoo loo marayo qaab Dastuuri ah. Guddiga dib-u-eegista iyo Hirgalinta 1 Dastuurkani waxaa uu abuurayaa Guddiga ee dib-u-eegista iyo Hirgalinta iyaga oo ah guddi hoos tagaya guddida la socodka hab waafaqsan qodobka Nidaamka Doorashooyinka iyo Xisbiyada Qiyamka Shaqaalaha Dawladda ee Rayidka ah Bannaanaanta Xafiiska Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Golaha Wasiirrada marka ay helaan kalsoonida Golaha Shacbiga waxay marayaan dhaarta ku xusan sharciga, waxaana ku hor dhaarinaya fadhi gaar ah ee Golaha Shacbiga Gudoomiyaha Maxkamada Dastuuriga.
Wasiirka dastuurka ee dawladda federalka Somaliya Cabdiraxman Xoosh Jibriil ayaa sheegay inay meel gabagaba ah marayso hawsha dastuurka inkastoo uu tilmaamay inay weli jiraan talooyin iyo faallooyin ay dastuurka dastyurka yeeshaan madaxda sare ee dawladda iyo saxiixayaasha Road mapka. Madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waxay haynayaan xafiiska ugu badnaan labo xili oo midkiiba uu yahay 5 sano.
Gobannimada iyo midnimada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waa laguma-xadgudbaan. Qodobka aad-Bannaanaanta Xaafiiska Madaxweyne-Ku-Xigeenka Madaxweyne ku-xigeenka haddii uu geeriyoodo, iscasilo ama xilka laga qaado A fhayeenka Golaha Shacbiga ayaa la wareegaya xilkiisa.
Cutubka 13aad – Hay’adaha Dowlad-Goboleedyada. Qaadashada wax ka bedelka Dastuurka inta dasturka guda jiro muddo xileedka koowaad ee Aqalka Shacab; ansixinta Dastuur kama dambays ah Dhaqangelidda Sharciyada Hindise sharci qabyo ah wuxuu dhaqan-gelayaa kaddib marka uu maro habraaca sharci- dejinta ee ku xusan qaybtan, Madaxweynaha Jamhuuriyadduna saxiixolaguna soo saaro Faafinta Rasmiga.
Gacanka Cadmeed; b Waqooyi Galbeed: Guddiga waa inay guddigu ka madax banaanaadaan waaxda fulinta waana inay maamushaan maaliyadooda u gaarka ah. Xilka Xeerdejinta ay wadaagaan labada Gole Xilka sharci-dejinta ee ay wadaagaan labada gole waxaa ka mid ah: